I-infographic: Umhlahlandlela Wokuxazulula Izinkinga Zokulethwa Kwe-imeyili | Martech Zone
Lapho ama-imeyili equbuka kungadala ukuphazamiseka okuningi. Kubalulekile ukufika phansi kwayo - ngokushesha!
Into yokuqala okufanele siqale ngayo ukuthola ukuqonda kwazo zonke izinto ezingena ekuthumeleni i-imeyili yakho ebhokisini lokungenayo… lokhu kufaka hlanhlanzeko yakho yedatha, idumela lakho le-IP, ukumiswa kwakho kwe-DNS (i-SPF ne-DKIM), okuqukethwe kwakho, nanoma yikuphi ukubika ku-imeyili yakho njengogaxekile.
Nayi i-infographic enikeza ukubuka konke okubucayi kokuthi i-imeyili isuka kanjani ekudalweni iye ebhokisini lokungenayo. Izinto ezigqanyisiwe yizo ezithinta amathuba okuthi i-imeyili yakho ithunyelwe ebhokisini lokungenayo lalowo obhalisile:
Ukuxazulula izinkinga ze-Bounce Issues
Ukuze uqiniseke ukuthi ungaxazulula inkinga futhi ulungise izinkinga ngokulethwa kwe-imeyili ngokushesha nangempumelelo, nansi igxathu negxathu eliqondile lezinkinga zezinkinga zokuxazulula inkinga.
Isinyathelo 1: Buyekeza Amafayela Wakho Wokungena Nge-imeyili noma i-Database yama-Bounce Codes
Bheka i-database yeklayenti le-imeyili elibhampa kakhulu. Bheka ikhodi eguqukayo bese ubona ukuthi iqala yini 550 ikhodi yokubhampa. Uma kunjalo, a isihlungi sogaxekile inkinga yakho. Ukucela abamukeli ukuthi bengeze ikheli le-imeyili koxhumana nabo kungenzeka kukuxazulule lokhu. Uma kungenzeki, iya esinyathelweni esilandelayo.
Isinyathelo 2: Hlola ukumiswa kwakho kwe-SPF, i-DKIM, ne-DMARC, izilungiselelo ze-DNS, nezinqubomgomo
Lesi yisinyathelo sakho esilandelayo ukuthi uyayithola yini noma cha ikhodi ye-550 bounce. I-software ehlukahlukene iyatholakala ukukusiza ukuqedela lesi sinyathelo:
MXTobox I-Google Check MX Isiqinisekisi se-DKIM
Lapho lezi zinyathelo zingasethwanga kahle kungadala izinkinga zokulethwa kwe-imeyili. Ngokwengeziwe, ungaqinisekisa lawa masethingi ngokufunda ngemininingwane yakho yeheda ye-imeyili - imvamisa ikukhombisa ukuthi umsunguli udlulise la masheke noma cha.
Isinyathelo 3: Hlola Idumela Lakho le-IP / Amaphuzu Wokuthumela
Uma inkinga iqhubeka kungaba nenkinga nge Idumela lekheli le-IP noma isikolo somthumeli. Buyisa Indlela (manje ephethwe yi-Validity) software ikuvumela ukuthi uhlole amaphuzu womthumeli we-IP. Uma amaphuzu engaguquguquki lokhu kuzokunikeza ukuqonda okuthile ngembangela yenkinga. Le software futhi ingakusiza ukuthi ubone izindlela zokwenza ngcono ukuya phambili.
Isinyathelo 4: Bheka ukuthi ikheli lakho le-IP livinjelwe yini
Kunezinsizakalo ezivela eceleni lapho ama-ISPs kanye namaseva wokushintshana ngeposi aqinisekisa ngokubona ukuthi kufanele ngabe baletha i-imeyili yakho ebhokisini lokungenayo lekhasimende labo. Spamhaus ungumholi kule mboni. Uma unganikeza umzila wokucwaningwa kwamabhuku onobudlelwano bebhizinisi nalowo obhalisile okubike njengo-SPAM noma amarekhodi okungena, ngokujwayelekile bazokususa kunoma yiluphi uhlu lwamagama
Isinyathelo 5: Bheka okuqukethwe kwakho
Abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi kanye namaklayenti e-imeyili babheka amagama akwi-imeyili yakho ukuthola amathuba okuthi Ugaxekile. Ukusho nje ukuthi “Mahhala” kulayini wezihloko noma izikhathi eziningi kukho konke okuqukethwe kwakho kungathunyelwa i-imeyili yakho ngqo kufolda ye-Junk. Abahlinzeki Bensizakalo ye-imeyili abaningi bazokusiza ukuthola amaphuzu ngokuqukethwe kwakho futhi ususe amagama angakufaka enkingeni.
Isinyathelo 6: Xhumana noMhlinzeki Wensizakalo ye-Inthanethi Yombhalisi
Uma amaphuzu womthumeli kungeyona inkinga, kungadingeka ukuxhumana neklayenti le-imeyili olikhombe esinyathelweni sokuqala. Izinkinga zokulethwa zingenzeka ngabahlinzeki abakhulu abanjengo-Gmail, Microsoft, BigPond, ne-Optus. Kodwa-ke, uma ngabe ukhombe ukuthi iklayenti lizoba ikheli le-imeyili likahulumeni kungcono ukungayinaki le nkinga ngoba akunakwenzeka ukuthinta inhlangano efanele ngqo.
Cela abahlinzeki benkonzo yamakhasimende e-imeyili (i-Microsoft, i-Google, i-Telstra, i-Optus) ukuthi igunyaze ikheli le-IP. Lokhu kufanele kuvimbele inkinga ukuthi ingenzeki futhi. Qiniseka ukuthi i-SPF, i-DKIM, ne-DMARC baqinisile ngaphambi kokuxhumana nabanikezeli bezinsizakalo - lo kuzoba ngumbuzo wabo wokuqala. Uzodinga ukufakazela ukuthi lezi zinyathelo zisethwe kahle ngaphambi kokuthi zenze noma yini.
QAPHELA: Ifolda Ye-Junk Is Kuthululiwe
Gcina ukhumbula ukuthi i-bounce isho ukuthi insizakalo yomamukeli iyenqabile i-imeyili futhi yaphendula ngaleyo khodi. I-imeyili elethwayo (250 ikhodi elungile) isengathunyelwa ku- a Ifolda ye-Junk… Into osazoyixazulula. Uma uthumela amakhulu ezinkulungwane… noma izigidi zemiyalezo, usazofuna ukusebenzisa indlela ye- ithuluzi lokubeka ibhokisi lokungenayo ukuxazulula inkinga ukuthi ama-imeyili akho aya ebhokisini lokungenayo noma kufolda engenamsoco.
Ukusebenza ngalezi zinyathelo kufanele kukuvumele ukuthi uxazulule izinkinga eziningi zokuthumela i-imeyili ngaphandle kobunzima. Kodwa-ke, uma uziqedile lezi zinyathelo kepha inkinga ihlala ikhona, usizo luseduze - xhumana nethimba lethu ukuze uthole ukusekelwa.
Ngokuya ngomhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ongenhla, sisize amaklayenti amaningi ukuxazulula izinkinga zawo zokulethwa kwezidingo. Isibonelo, kwelinye lamabhange amabhizinisi ase-Australia, silandele lezi zinyathelo ezingenhla ukukhulisa ukuhanjiswa kusuka ku-80% kuye ku-95% ezinyangeni ezimbili.
Tags: 250ok550 gxumauhlu olumnyamabounce ama-imeyiliukuchofozaukuhanjiswadkimI-DMARCukukhishwa kwe-imeyiliukulethwa kwe-imeyili infographicukuqhuma kanzimaisebenza kanjani i-imeyilimaka njengokudla okungenamsocomaka njengokungekho okungenamsocobika ugaxekileSpamhausi-spfUkuxazulula inkinga ukulethwa kwe-imeyilizikhiphe ohlwini
Ukumaketha Kwephunga: Izibalo, Isayensi Olfactory, Nemboni